Ifektri ephezulu ye-collar collar collar kanye nabaphakeli - QQQPETS
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhola yezinja > Ifektri ye-Collar yenja
Ifektri ethengiswa kakhulu yenja yenja ye-collars ngqo ngemibala ehlukahlukene, izinto zokwakha, umkhiqizo wesayizi nge-QQPETS COUR COLLAR COLL. Lapha ungakhetha zonke izinhlobo zezinto zokwakha izinkambiso zenja yakho efana ne-nylon, i-polyester, isilika, i-pp, ukotini, okuhlala isikhathi eside, i-eco-friendly, ethambile futhi ithambile ngezinja zokuqeqesha. Sinezobuciko ezikhethekile ze-logo yokuphrinta efana ne-Transfer yokushisa ephrintiwe, isikrini se-silk esiphrintiwe, i-jacquard noma elukiwe. Kunezinhlobo ezahlukene zezesekeli ongazikhethela ama-collars ezinja. Sihlinzeke ngensizakalo entsha yabanikazi lapha. Uma ufuna ukuklama ama-collars akho enja eyenzelwe wena, ahlinzeke ngemibono noma i-logo yakho. Abaklami bethu abangochwepheshe bangayiklama njengesicelo sakho samahhala. Xhumana nathi manje noma ushiye ikheli lakho le-imeyili lapha, sizokuphendula kungakapheli amahora angama-24. Faka i-imeyili Thola incwajana.IF Udinga ukucaphuna komkhiqizo okunemininingwane, sicela uchofoze u-Thumela uphenyo manje thola intengo.
QQPETS Blue Inja collar harness ne-leash isethiwe
QQPETS Blue Inja collar harness ne-leash isethiweUkufakwa kwe-polyester webyed nge-neoprene padded impahla yekhola kanye nesibambo se-leash.I-collar enomnsalo. I-harness ithambile futhi ikhululekile.Siyifektri, singakwazi ukwenziwa ngezifiso nezindlela eziphrintiwe, ubukhulu nokunye.
I-QQQPETS Fekthractiform TOW CALL nge-Chain
I-QQQPETS Fekthractiform TOW CALL nge-ChainIdizayini nosayizi ngokwezifiso, impahla, isengezo.Siyimboni,Umhlinzeki wezilwane ozenziwe ngokwezifiso ongumhlinzekiUma unombono, wamukelekile xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ikhola yenja yokwenziwa ngokwezifiso enabakhiqizi beminsalo
I-QQPPETS Professional inja ye-collar enomnsalo kanye nokufanisa abakhiqizi bezinja zenja yenja,Sine-technology esesikhathini, imishini nezinto zokusetshenziswa ezivuthiwe ezifinyelela e-EU standard.Uma ufuna ukwenza ngokwezifiso ikhola noma i-bandana yenja yakho, sicela uxhumane nathi.
Ama-Qqpets aholele ukukhanya kwe-collar collar ebusuku ukuhamba okukhanyayo okwenziwe ngezifiso okukhanyayo okukhanyayo okubonisa ama-collars ayisisekelo ama-collars amancane amancane aphakathi ezinja
Sizokwenza ikholaji yakho isebenzisa intambo ebonakalayo.I-collar ngayinye ekhombisa izosebenzisa imigqa emi-2 ekhetheke kakhulu yentambo ebonakalayo.Umugqa ngamunye ocashile wentambo uqinisekisa ukuthi inja yakho izobonwa ebusuku nasezimweni eziphansi.
I-Wholesale Premium Soft Nylon Ebonisa I-Collar Collar
Sizokwenza ikholaji yakho isebenzisa intambo ebonakalayo. I-collar ngayinye ekhombisa izosebenzisa imigqa emi-2 ekhetheke kakhulu yentambo ebonakalayo. Umugqa ngamunye ocashile wentambo uqinisekisa ukuthi inja yakho izobonwa ebusuku nasezimweni eziphansi.
Glow in the Cool Collar: QQQpets Factory Ukukhanya Okusha Kusha Kukholoji Emnyama
Umbukiso wakamuva we-LED Dog Collars uzoqhubeka kwi-22nd China International Pet Show.Sizokulinda eHholo 11.2, E02. Uyemukelwa ukuxhumana nathi!Siyethemba ukwakha ukubambisana kwesikhathi eside futhi sinikeze imikhiqizo engcono kakhulu kanye nensizakalo yakho.Uyemukelwa ukuvakashela ifektri yethu eChina.
Ikhola yenja ye-LED BUBLEKILE: I-Durable Yamanzi Inando Yezinja Ezikhanyayo
Umbukiso we-LED Dog Collars wakamuva uzoqhubeka nombukiso wezilwane zasekhaya ezingama-22 China International Pet.Sizokulinda eHholo 11.2, E02. Uyemukelwa ukuxhumana nathi! Guangzhou QQPETS PET Products Co, Ltd. I-Collars / I-Harness / Umkhiqizi Wethuthi kanye nomthumeli eChina.Sigcina ukuthumela ama-oem pet collars& i-leashes iminyaka engaphezu kwengu-15.
Ama-Collars a-LED amasha aholwa kanye nama-qqpets
Ama-collars asanda kukhombisa aholwa izinja nezinja ezishisayo zithengisa ku-www.qqpets.com.Sikhiqiza zonke izinhlobo zemikhiqizo yezilwane ezifuywayo kubandakanya ukuhamba kwamahhanisi wezilwane ezifuywayo, ama-pet collars, ama-pet aleashes, agijima ama-pet asheri, njll.Thanda isilwane, unake isilwane ngaphandle.Sicela uxhumane nathi nganoma yiluphi olunye ulwazi.
I-LED Dog Collars yakamuva: I-Durable waterproof ekhombisa umphumela wenja collars
Umbukiso wakamuva we-LED Dog Collars uzoqhubeka kwi-22nd China International Pet Show.Sikhiqiza zonke izinhlobo zemikhiqizo yezilwane ezifuywayo kubandakanya nokuhamba kwamahhanisi wezilwane zasekhaya, ama-pet collars, ama-pet aleases, agijima ama-pet asherati njll.Thanda isilwane, unake isilwane ngaphandle. Sizokulinda eHholo 11.2, E02. Uyemukelwa ukuxhumana nathi!
I-Nylon ekhombisa ukukhombisa umphakeli: 2020 Hot Thengisa ama-collars amancane wenja umbala oqinile
I-Collars yenja ekhanyayo ingabonisa ukukhanya ebumnyameni ukuvikela izinja ngaphandle.Inkambiso yenza ama-collars wezinja. Thola okwakho lapha. Xhumana nathi.Izinzuzo ezibalulekile Ukukhishwa kwepulasitiki okusheshayo okusheshayo ngensimbi ye-D-ring Kuguqulwe ukuze kulunge kahle Ukwakhiwa kwe-nylon ephezulu kakhulu Umshini wokugeza emanzini abandayo,umugqa womile Ukunquma usayizi ofanele, ukukala ukujikeleza kwentamo yesilwane bese wengeza u-2 "
I-Collars ebonakalayo: I-Wholesale Inja Collar inikela ngezifiso zenja collars-qqpets
Izinzuzo ezibalulekile Ukukhishwa kwepulasitiki okusheshayo okusheshayo ngensimbi ye-D-ring Kuguqulwe ukuze kulunge kahle I-polyester ethambile nentofontofo ye-polyester webbing Ukugeza ngomshini emanzini abandayo, komile owomile Ukunquma usayizi ofanele, ukukala ukujikeleza kwentamo yesilwane bese ufaka u-2 "